म वडाको आमा हुँ – वडाध्यक्ष शोभा सापकोटा::Nepali News Portal from Nepal
बागलुङ जन्मेकी शोभा सापकोटा काठमाण्डौंलाई कर्मथली बनाइ अहिले काठमाडौं महानगरको एक्ली महिला वडाध्यक्ष भएकी छिन् । ३२ वडाध्यक्षमध्ये उनी वडा नम्बर १४ की अध्यक्ष हुन् । आफू निर्वाचित भएपछि अनुभूति हुनेगरी वडामा परिवर्तन भएको उनको दाबी छ । वडाध्यक्ष सापकोटासँग विकास निर्माण, समस्या र योजनाका बारेमा गरेको कुराकानी ।
वडाध्यक्ष भएपछि के–के काम गर्नुभयो ?
म आउनुभन्दा अघि र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउने काम दोस्रो चरणमा थियो । मेरै पहलमा पाइपलाइन जडान गर्ने काम सकिएको छ । बाटो बिग्रिएका थिए, ढल व्यवस्थित थिएनन् । अहिले बाटो पिच गर्ने काम भएको छ । ढल व्यवस्थापनको काम भएको छ ।
तपाईले देखेका वडाका प्रमुख समस्या के-के हुन् ?
हाम्रो वडामा खानेपानीको समस्या विकाराल छ । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पनि छ । गल्ली धेरै छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । गल्लीमा एम्बुलेन्स, दमकललगायत साधन छिर्न सक्दैनन् । त्यसैले स्थानीयसँग छलफल गरेर, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर बाटो विस्तार गर्नुपर्नेछ । प्रदूषण काठमाडौंभरकै समस्या हो । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सिंगो महानगरकै ध्यान गएको छ । मेरो वडामा पनि यो समस्या छ । कंलकी चोकको बाटो बनेपछि त्यो समस्या थोरै भए पनि न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने आशा छ । मेलम्चीले भित्री गल्लीमा पाइप बिछ्याइरहेको छ । जसका कारण धुलोको समस्या बढेको छ र गल्ली अव्यवस्थित बनेका छन् । हामीले बनाएको बाटो पनि उहाँहरूको कामका कारण बिग्रिएको छ । भित्री सडक सफा नभई मुख्य सडक सफा हुँदैनन् । सडक बनाउने र भत्काउने भइरहँदा विभिन्न समस्या भइरहन्छन् ।
वडा कार्यालयको भवन बनाउनुपर्नेछ । कार्यालय भाडामा लिएर काम गर्दा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । साँघुरो कार्यालय हुँदा भिडभाड हुने गर्छ । विभिन्न खालका झगडा, विवादका विषय समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, छुट्टै बसेर छलफल गर्ने स्थानसमेत छैन । त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता कार्यालय भवन बनाउने हो । अहिले भवनको नक्सा पासको काम भइसकेको छ । अबको एक सातामा कागजी प्रक्रिया सकिन्छ । अर्कोतर्फ, बल्खु खोलामा करिब दुई किलोमिटर करिडोर निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसको डिपिआर तयार भइसकेको छ । खोलाको दुवै साइडमा करिडोर निर्माण गरिसक्ने योजना छ । अहिले बल्खु खोलामा सेफ्टी ट्यांकी मिसाउने गरिएको छ । त्यो नमिसाउनका लागि ठूूला दुई पाइप दुई तर्फबाट राख्ने र खोलामा मिसाउन नदिने योजना छ । हिजोका दिनमा हामी बल्खु खोलामा कपडा धुन, नुहाउन सक्थ्यौँ । अहिले दुर्गन्धित बनेको छ । त्यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन मैले पहल गरिरहेकी छु । विकास निर्माणका साथै अन्य काम अगाडि बढाउनेछौँ । धेरै दिदीबहिनीमा चेतनाको अभाव छ । उहाँहरूलाई सशक्तीकरण तालिम दिइरहेका छौँ । आगामी दिनमा पनि दिनेछौँ ।
महानगरमा एक्लो महिला वडाध्यक्ष हुँदा काम गर्न सहज/असहज कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
अहिले देश संघीयतामा गएको छ । हाम्रा लागि यो नयाँ अनुभव हो । महिला जनप्रतिनिधिलाई मात्रै होइन, पुरुष जनप्रतिनिधिलाई पनि अहिले काम गर्न समस्या छ । महिला भएकै कारण काम गर्न समस्या भएको छैन । जन्मिएदेखि मृत्यु हुँदासम्मका काम वडाले गर्नुपर्छ । जनआकांक्षा पूरा गर्ने मेरो मुख्य ध्येय हो । महिला भनेका घरपरिवारका आमा पनि हुन् । घरमा आमा असल भयो भने परिवार सुखी हुन्छ । नारी खराब भए भने घर बिग्रन पनि सक्छ । म वडाको आमा हुँ, अभिभावक हुँ । मैले वडालाई राम्रो बनाउनुपर्छ । नमुना वडाको रूपमा विकास गर्नेछु ।